Gabar sanad jir ah oo laga soo badbaadiyey burcad ku afduubatay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Afduubyada foosha xun ayaa weli kasoo jira caasimadda Soomaaliya ee Mqudisho, inkastoo xaaladda ammaan ay yara soo hagaageyso.
Koox burcad ah ayaa dhawaan gabar yar oo jirta sanad iyo 2 bilood ka afduubtay banaanka hoire ee gurigooda, waxeyna aabaha dhalay ka dalbadeen 10 kun dollar kadib markii ay taleefoon kala soo xiriireen.
Markii falkaasi dhacay waxaa howlgal qaaday ciidanka booliska degmada Howl-wadaaga iyo kuwa Nabadsiugidda, si gabartaas loo soo celiyo.
Saraakiisha Booliska degmada Howla-Wadaag ayaa sheegay iney soo badbaadiyeen gabarta yar 14 bilood jir aheyd, kadib markii afduub loo heystay muddo 24-saac ah.
Taliyaha Saldhiga Booliska Suuqa Bakaaraha G/lle Xuseen Siciid Jimcaale ayaa sheegay in markii lagu soo wargeliyay gabadha yar ee la afduubtay ay sameeyeen howlgal baadigoob ah, dabadeedna ay ka soo heleen goob lagu qarinayay oo guri jiinkad aheyd.
“Markiiba waxaa ka howl galnay inaan baadigoobka gabadha la afduubtay oo 24-saac maqneyd, waxaana ka soo helnay, meel qashin guri ah, oo ay adag tahay in qof ku noolaado” ayuu yiri Gashaanlle Xuseen Siciid.
“Aabaha gabadha dhalay ayaa taliska booliska soo wargeliyay oo ah in gabadhiisa la afduubtay, laguna xiray lacag madax furasho gaareysa 10-kun oo doollar” ayuu sidoo kale yiri Taliyuhu.
Aabaha dhalay gabadha yar ee la afduubtay oo lagu magacaabo Maxamuud Cismaan ayaa sheegay inay layaab ku noqotay in gabadhiisa lagu hayay meel ku dhow gurigiisa.
“Aniga layaab ayay ila aheyd gabadheyda oo meel guri ii dhow ah in lagu hayay, kooxihii afduubtay ayaa gabadha markii ay banaanka guriga ka wateen isoo wacay, waxayna i dhaheen hadaadan keenin $10,000 (Toban kun oo doolar) gabadhaada oo meyd ah ayaa banaanka ku soo dhigeynaa” ayuu yiri aabaha dhalay gabadha, Maxamed Cismaan.
Laamaha Amaanka ee howlgalkaan sameeyey ayaa sheegay iney soo xireen dhowr qof oo looga shakisan yahay iney ku lug lahaayeen falka afduubka ah ee lagula kacay habadhaas sanad jirka ah.
Wariyaal diiday iney baaraan Eeyahada ay adeegsadaan ciidamada AMISOM